Cruise ခရီးသွားခြင်း - အကောင်းဆုံးခရီးစီစဉ်ရန်အကြံဥာဏ်များ ခရီးသွားသတင်းများ
သင်ဟာအပျော်စီးခရီးတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေပြီဆိုရင်၊ အဲဒါကအစီအစဉ်တွေလုပ်ဖို့အချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကိုပြီးပြည့်စုံ ငါတို့ဘာမှမေ့လို့မရဘူး! ဒါပေမယ့်ခရီးဆောင်အိတ်အကြောင်းပြောနေတာဘဲ၊ အရာအားလုံးကိုကောင်းကောင်းချည်နှောင်ထားဖို့ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းပြောပြီးဒါကငါတို့ထင်တာထက်အများကြီးစောပြီးစခဲ့တယ်။
၎င်းသည်ထူးခြားသောအခိုက်အတန့်၊ မမေ့နိုင်သောနေ့အချို့ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဤအရာအားလုံးမှကင်းလွတ်ရန်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်ရန်အကြံပြုသည်။ အပျော်စီးခရီးစီစဉ်ခြင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ငါတို့ကမင်းကိုအရာအားလုံးကိုနောက်ဆုံးမိနစ်ထိမထားခဲ့ချင်ဘူး၊ မင်းအတွက်ငါတို့အံ့သြစရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့မင်းကိုအကြံပေးရုံပဲ။
အပျော်စီးခရီးတစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကမင်းမှာတိကျတဲ့ ဦး တည်ချက်ရှိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင် ၀ ယ်လိုအားအများဆုံး ၀ ယ်သူတွေကမင်းနေရာကိုမကုန်ဆုံးရအောင်မင်းစဉ်းစားရမယ်။ မြေထဲပင်လယ်အပျော်စီးအပျော်စီးသင်္ဘောများသည်ရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မရ။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမမေ့နိုင်သောရှုခင်းများထက်ပိုပေးသည်။ ဟိ ဂရိအပျော်စီး မင်းရဲ့ဘဝမှာအနည်းဆုံးတစ်ခါလောက်လူကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးသင့်တဲ့ဒဏ္ologyာရီတွေ၊ အထိမ်းအမှတ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ကျွန်းအားလုံးကိုရှာဖွေဖို့မင်းကိုဖိတ်တယ်။
အခြားတဖက်တွင်မူ အေသင်၊ Crete၊ Mykonos သို့မဟုတ် Santorini မှတဆင့်မရ။ သူတို့ကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်ငါတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကမ်းခြေများထဲတွင်အထူးခြားဆုံးပေါင်းစပ်မှုရှိလိမ့်မည်ကိုငါတို့သိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကာရစ်ဘီယံကို ဖြတ်၍ အပျော်စီးသင်္ဘောသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနော်ဝေ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်သို့စတော့ခ်ဟုမ်း (သို့) ကိုပင်ဟေဂင်သို့ပျော်မွေ့ရန်ခွင့်ပြုသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ fjords (သို့) Baltic မြို့တော်များမှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပျော်စီးခရီးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
ဒါဟာတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့ခရီးမဟုတ်ဘူး၊ တော်တော်ဆန့်ကျင်ဘက်ဘဲ။ အကောင်းဆုံးကအဲဒါကိုကြိုတင်စီစဉ်ဖို့ကြိုးစားတာ၊ အဲဒါငါတို့ရဲ့အိမ်မက်ဆိုရင်ငါတို့အဲဒါကိုမနှောင့်နှေးတော့ဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်တင့်မျှတသောခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုမပေးနိုင်ပါ၊ တစ်နှစ်ကြိုခြင်းသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံနှစ်နှစ်မတိုင်မီပြုလုပ်နိုင်သည်မှန်သော်လည်း၊ အလွန်အကျွံဖြစ်လျှင်၎င်းကိုသတိရပါ ကြိုတင်မှာယူခြင်း၏အားသာချက်များအနက်အပျော်စီးသဘောင်္အမျိုးအစားများအပြင်၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်များ၊ ရက်များရရှိနိုင်ခြင်း (သို့) အကြီးဆုံး Cabin များရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကများသောအားဖြင့်အရင်ကြိုတင်မှာထားတဲ့သူတွေပါ။ သင်အမြန်ဆုံးကြိုတင်မှာယူပါကအချို့သောအရောင်းမြှင့်တင်မှုများမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူနိုင်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ ဟိ ၂၀၂၂ သင်္ဘောများ ယခုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည်အတောင်းဆိုဆုံးမေးခွန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်သွားမည့်အပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်းသည်လှေအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင့်အားအမြဲအကြံပေးနိုင်သည်ဟုဆိုရပါမည်။ ဒါတောင်ငါတို့မင်းကိုပြောလိမ့်မယ် သင်လှေမစီးဖူးပါကအလယ်ပိုင်းရှိလေယာဉ်ခန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် နှင့်အောက်ထပ်တွင် ၎င်းသည်လှေ၏ရွေ့လျားမှုကိုသိသာထင်ရှားမှုမရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါင်းမူးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်အမှန်တကယ်အိပ်ရန်လုံလောက်ရုံနှင့်အောက်ပိုင်းရှိအခန်းတစ်ခန်းကိုအကြံပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၎င်းသည်သင်အချိန်ပိုအနားယူနိုင်သည်ဟုသင်ထင်ပါကလူများများစုဝေးရာနေရာများမှဝေးဝေးထားပါ။
ထုပ်ပိုးမှုသည်၎င်း၏ဆားတန်ဖိုးရှိသောမည်သည့်ခရီး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမဆိုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာလောင်းခြင်းနှင့်တူသောအရာမရှိပါ။ 'ကိစ္စတွင်သာ' ဆိုတဲ့စကားစုကိုငါတို့လုံးဝမေ့သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ကီလိုထက်ကျော်တဲ့ခရီးဆောင်သေတ္တာတစ်လုံးကိုငါတို့တွေ့တယ်။ ဒါကြောင့်၊ ချော်မကျသောဖိနပ်များနှင့်တစ်နေ့တာအတွက်အဆင်ပြေသောအ ၀ တ်များ ၀ တ်သင့်သည်ကိုသတိရပါမရ။ လှေပေါ်တက်ဖို့ရော၊ အပျော်ခရီးထွက်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီနေရာမှာငါတို့ဖိနပ်ပုံစံပြောင်းလိမ့်မယ်။
ညနေခင်းများအတွက်တစ်ခါတစ်ရံမှာအနည်းငယ်ပိုရင်းရင်းနှီးနှီးညစာစားပွဲကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဝတ်အစားကိုလည်းထပ်ထည့်နိုင်တယ်။ အားကစားဝတ်စုံနှင့်ရေကူးဝတ်စုံများလည်းလိုအပ်လိမ့်မည်မရ။ မင်းမှာသင်္ဘောရှိလားဆိုတာမင်းသိသင့်ပေမဲ့မင်းရဲ့ဂျယ်လ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးသေးသေးလေးတွေကိုအမြဲသယ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ ဆံပင်နဲ့အခြောက်ခံစက်ကိုမင်းဆံပင်နဲ့အ ၀ တ်တွေမယူခဲ့နဲ့။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အများအားဖြင့်ခွင့်မပြုသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အဝတ်အစားတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေကိုပိုအာရုံစိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်၊ သင်သွားတိုက်တံဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်းလ်ကိုမမေ့ပါနဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းမှာပတ်စ်ပို့နဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးကဒ်နှစ်ခုလုံးပါရမယ်။ မင်းဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ဖြစ်မယ့်အရာကိုရွက်လွှင့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Cruceros » အပျော်စီးခရီးစီစဉ်ရန်အကြံဥာဏ်များ